Jose vs Klopp – United vs Reds – Kooxaha Ugu Guulaha Badan England Oo Isku Heysta Saxiixa Xidig Ka Tirsan Chelsea. - Wargane News
Home Sports Jose vs Klopp – United vs Reds – Kooxaha Ugu Guulaha Badan...
Manchester United iyo Liverpool ayaa la aaminsan yahay iney xagaaga soo aadan sameyn doonaan suuqgal weyn si ay ugu yaraan ugu hub aruursadaan xili ciyaareedka soo aadan markaas oo koox walba ay ku hamineyso iney ku guuleysato koobab muhiim ah.
Kubad sameeyaha Chelsea Cesc Fabregas ayaa noqday hubka ugu weyn oo ay ku dagaalami doonan labada kooxood ee Liverpool iyo Manchester United kaas oo lagu qiimeeyo lacag dhan 25 Malyan oo Pound.
29-jirkii hore Barcelona & Arsenal ayaan xaalad wanaagsan ku heysan garoonka Stamford Bridge marka laga hadlo waqtiga uu ciyaaro, waxaana la fahansan yahay inusan xidigaan kusii nagaan doonin galbeedka London.
Jose Mourinho ayaa aad u xushmeeya xidigaan waana macalinkii keenay Bridge sanadkii 2014, wuxuuna doonayaa inuu ku xoojiyo kooxdiisa Old Trafford, sidoo kalana Klopp ayaa doonaya inuu Cesc ku buuxiyo booska uu baneyn doono Coutinho oo la aaminsan yahay inuu Barcelona kusii jeedo.
Dhanka kale Bayern Munich, Ac Milan & Atletico Madrid ayaa si ba’an u baadi goobaya xidigaan, balse isaga wuxuu doorbidayaa inuu iska sii joogo England.
Laba sanadood ayaa kaga harsan qandaraaskiisa kooxda inkastoo uu horay u shaaciyay inuu ku raaxeysanayo xaaladda uu ku jiro hadana qorshaha suuqa ee Conte ayaa xidigaan usii tilmaamaya albaabka looga baxo Blues.